N’ihe dị ka otu narị afọ gara aga, e nwere otu fim e mere n’asụsụ Bekee, nke tọrọ ndị mmadụ ezigbo ụtọ. A naghị anụ olu ndị na-eme ya. Fim ahụ gosiri otú ihe dị n’oge ahụ n’obodo San Fransisko dị n’Amerịka. Ndị mere fim ahụ dewere kamera n’ihu ụgbọala yiri ụgbọ okporo ígwè. Ka ụgbọala ahụ na-aga, kamera ahụ ana-eseta ihe niile a na-eme n’okporo ụzọ ndị na-ekwo ekwo n’ebe a na-azụ ahịa. Ihe a na-ahụ na fim ahụ bụ ụgbọ ịnyịnya, ụdị ụgbọala ndị e nwere n’oge ahụ, nakwa ndị na-azụ ihe na ndị na-ere akwụkwọ akụkọ.
Mmadụ lee fim ahụ taa, ihe ga-agba ya anya mmiri bụ na ọ dị ka è setara ihe ndị ahụ n’ọnwa anọ n’afọ 1906, abalị ole na ole tupu otu ala ọma jijiji ọjọọ emee n’abalị iri na asatọ n’ọnwa ahụ. Ala ọma jijiji ahụ na ọkụ ọgbụgba ọ kpatara tara isi ihe karịrị puku mmadụ atọ. Ọ fọkwara obere ka o bibie ụlọ niile dị n’ebe ahụ o mere. O nwere ike ịbụ na ọ fọrọ naanị ụbọchị ole na ole ka ụfọdụ ndị e gosiri na fim ahụ nwụọ. E nwere otu nwoke bụ́ nwa otu n’ime ndị mepụtara fim ahụ. Aha ya bụ Scott Miles. O kwuru, sị: “M ka na-echeta ndị e gosiri na fim ahụ. Ha amaghịdị ihe na-aga ime ha. I lee fim ahụ, o nweghị ihe ga-eme ka ị ghara imetara ha ebere.”
Ala ọma jijiji amaghị ọkwa tupu ya emee n’obodo San Fransisko n’afọ 1906. Ala ọma jijiji ahụ na ọkụ ọgbụgba ọ kpatara bibiri ọtụtụ ebe n’obodo ahụ
Ọ bụrụ na anyị ejiri ihe mere n’oge ahụ tụnyere ihe na-aga ime n’oge anyị a, o kwesịrị ime ka anyị chee echiche. Anyị kwesịrị imetara ndị agbata obi anyị ebere. Ha na-arụ ihe ndị dịịrị ha n’ụbọchị. Ha amaghịdị njinji na-aga iji n’oge na-adịghị anya, ya bụ, mbibi Chineke ga-ebibi ụwa ọjọọ a na ihe ndị ụwa na-eme. Ma, mbibi ahụ agaghị adị ka ala ọma jijiji ahụ. Ala ọma jijiji anaghị ama ọkwa tupu ya emee. Ma, Jehova nyere obere oge anyị ga-eji dọọ ndị agbata obi anyị aka ná ntị na ụbọchị ikpe ya na-abịa. O nwere ike ịbụ na ị na-ewepụta oge kwa izu na-aga ezi ozi ọma n’ụlọ n’ụlọ. Ma, ì nwere ike ịgbakwu mbọ na-adọ ndị mmadụ aka ná ntị?
JIZỌS KWUSARA OZI ỌMA MGBE NIILE
Otú Jizọs si kwusaa ozi ọma baara anyị uru. O ziri onye ọ bụla ọ hụrụ ozi ọma, ma onye ọnaụtụ ọ hụrụ n’ụzọ ma otu nwaanyị ọ hụrụ n’akụkụ olulu mmiri mgbe ọ chọrọ izurutụ ike. (Luk 19:1-5; Jọn 4:5-10, 21-24) Ọ bụrụgodị mgbe Jizọs chọrọ izurutụ ike, ọ na-ahapụ ike ọ chọrọ izu ma kụziere ndị ọzọ okwu Chineke. Ọmịiko o nweere ndị agbata obi ya mere ka o mee ihe niile o nwere ike ime ka o nwee ike ịkụziri ha ihe. (Mak 6:30-34) Otú ahụ Jizọs si kwusaa ozi ọma gosiri na ọ ghọtara na oge agwụla agwụ. Olee otú ndị nkwusa si eme ka ya taa?
HA NA-EJI OHERE Ọ BỤLA EKWUSA OZI ỌMA
E nwere otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Melika. O bi n’ebe a na-anaghị ekwe ka ndị mmadụ bata. Ọtụtụ ndị agbata obi ya bụ ụmụ akwụkwọ si mba ọzọ. E nweghị akwụkwọ ị ga-ahụ nọmba ekwentị ha. Aha ha adịghịkwa n’akwụkwọ ebe e dere aha ndị bi n’ụlọ ahụ. Obi na-adị Melika ụtọ iji ohere ọ bụla o nwere na-ezi ndị ọzọ bi n’ụlọ ahụ ozi ọma, ma n’ebe a na-anọ echere mmadụ ma n’ígwè na-ebugo mmadụ n’ụlọ elu. O kwuru, sị, “E nwere ike ikwu na m weere ebe a ka ókèala m.” Ọ na-abụ, Melika gawa, ya ewere akwụkwọ anyị n’asụsụ dị iche iche. Ọtụtụ ndị agbata obi ya na-anata traktị na magazin o nyere ha. Ọ na-egosikwa ha otú e si abanye ebe Ndịàmà Jehova na-edewe ihe n’Ịntanet, bụ́ www.jw.org. Ọ na-amụrụ ọtụtụ n’ime ha Baịbụl.
Nwanna nwaanyị ọzọ aha ya bụ Sonia na-agbalịsi ike izi onye ọ bụla ọ hụrụ ozi ọma. Ọ na-arụ ọrụ n’ụlọ ọgwụ. O kpebiri na ya ga-ezi ndị niile ha na ya na-arụkọ ọrụ ozi ọma. Ihe mbụ o mere bụ ịmata ihe bụ́ mkpa ha, na ihe na-amasị onye nke ọ bụla. Ya ejirizie mgbe ha ji eri nri ehihie chọta otu onye, zie ya ozi ọma. Sonia esila otú ahụ mụwara mmadụ abụọ Baịbụl. Ihe ọzọ ọ chọrọ ịna-eme n’oge ahụ ha ji eri nri ehihie bụ ịnọ n’ebe a na-anọ echere mmadụ n’ụlọ ọgwụ ahụ na-ezi ndị na-eche dọkịta ozi ọma.
JIRI OHERE Ọ BỤLA I NWERE NA-EZI OZI ỌMA
Otu nwoke ala ọma jijiji ahụ mere n’afọ 1906 na-egbughị kwuru na ala ọma jijiji ahụ bụ “njinji kacha njọ jitụrụla n’obodo ọ bụla.” Ma, ọdachi niile e nwetụrụla n’ụwa a enweghị ihe ha bụ ma e were ha tụnyere ụbọchị ikpe Chineke nke ga-abịakwasị ‘ndị niile na-amaghị Chineke.’ (2 Tesa. 1:8) Jehova chọsiri ike ka ndị mmadụ nabata aka ná ntị o si n’aka Ndịàmà ya na-adọ ha ma chegharịa.—2 Pita 3:9; Mkpu. 14:6, 7.
Ì nwere ike iji ohere ọ bụla i nwere zie ndị mmadụ ozi ọma mgbe ị na-arụ ihe dịịrị gị n’ụbọchị?
Ihe ùgwù i nwere bụ inyere ndị mmadụ aka ka ha ghọta na anyị bi n’oge dị oké egwu, kwụsịkwa ịchụ ihe ga-abara naanị onwe ha uru ma chọọ Jehova. (Zef. 2:2, 3) Ì nwere ike iji ohere ọ bụla i nwere na-ezi ndị mmadụ ozi ọma, ma ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ ma ndị agbata obi gị ma ndị ị na-ahụ mgbe ị na-arụ ihe dịịrị gị n’ụbọchị? Ị̀ ga-agbakwu mbọ na-adọ ndị ọzọ aka ná ntị?
mailto:?body=Ì Nwere Ike Ịgbakwu Mbọ Na-adọ Ndị Ọzọ Aka ná Ntị?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2013768%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ì Nwere Ike Ịgbakwu Mbọ Na-adọ Ndị Ọzọ Aka ná Ntị?